I-NOS kunye ne-RTL zinika ingqalelo epheleleyo kwizibanzi ezinzulu zokufihla imveliso yazo enzulu: UMartin Vrijland
Kufakwe kuyo IIMVIWO ZAMAZIKO	by UMartin Vrijland	kwi-9 Septemba 2019	• 11 Comments
Kwiintsuku zamva nje, zombini i-RTL kunye ne-NOS yajika yajongisa ngokupheleleyo imeko yenzulu. Sibona into efanayo apha njengombandela 'weendaba ezingezizo'. Abona bavelisi bakhulu beendaba ezingezizo kunye nabona basebenzisi bukhulu betekhnoloji enzulu iya kuphambukisa ingqalelo yabo bathi imibutho yolwaphulo mthetho, abashokobezi okanye iRussia ngabo bayisebenzisayo. Kwaye kunjalo i-DARPA (i-Arhente yoPhando ngezoKhuselo kwiZiko lezoKhuseleko liziko le-US lezoKhuseleko) phuhlisa itekhnoloji Ngubani ozamkelayo kwaye aziqonde iifilimu ezizizo, ukuze iindaba eziphambili zihlale zixhomekeke kolu phawu lomgangatho. Fumana umfanekiso?
Ngubani onayo yonke imali kunye nezixhobo zokudlala abantu ngeengcambu ezinzulu? Kuthekani ngomhlobo wethu omkhulu uJohn de Mol kunye nezigidi zakhe? Intsapho ye-de Mol inayo yonke imali kunye nezixhobo ukuze bazinike umfanekiso opholileyo ngo-Johnny ovukelayo kunye noLinda onoyolo. Okwangoku, uJohn de Mol ungumnini weAlgemeen Nederlands Persbureau.
Xa uJohn D. Rockefeller waba ligosa lokuqala e-US nenkampani yeoyile, wasebenzisa umenzi wefilim ukubonisa ukuba usasaza imali esitratweni. U-Rockefeller wazikhupha kwisingxobo seengxowa ezithiyileyo waba yiphilanthropist ethandwayo. Lixesha lokuba uvula amehlo akho banzi kwaye ubone indlela iihres ehamba ngayo kunye nendlela imigodi emba phantsi kwesiseko sobukho bethu. Ubanjwe ngokudityaniswa kweTumans ngendlela yamajelo osasazo, endiye ndayibonisa apha kwiwebhusayithi kwiimeko ezininzi ukuba babeka ukubanjwa phambi kwekhamera kwaye bamisela zonke izidubedube ngoncedo lwendlela ephilayo yokuyibonisa ezindabeni ngokuhlwa (bona apha en apha). Kwaye aba bavelisi beendaba abasayi kusikhohlisa kuyo yonke imida? Kutheni ucinga ukuba uJeroben Pauw kunye noMatthijs van Nieuwkerk njl njl. Kuba bangabadlali be-1 abadlali bembono yakho yehlabathi. Iindwendwe zetafile eziqeshiweyo zivunyelwe ukugcwalisa imbonakalo yengxoxo kunye nokugxeka, ukuze ukholelwe ukuba "ngokwenene into iyenzeka". Uyaakhohliswa.
Kubalulekile ukuba uqale ubone ukuba imithombo yeendaba ayigcini ngokuvelisa iindaba ezingeyonyani, kodwa kunye nokusebenza ubuchwepheshe obunzulu. Bazama ukuphambukisa ingqalelo yakho kubo neengxaki ezinjengokukrexeza okanye iividiyo ezingamanyala noDionne Stax. Yiyo yonke loo nto ibangela inkxalabo kwaye yile njongo, kuba kufuneka ukhathazeke kakhulu malunga 'nabaphuli-mthetho' ukuze urhulumente abuyisele inkqubo yolwaphulo-mthetho kwimisebenzi yayo. "Ingxaki, Ukuphendula, IsisombululoIbizwa ngokuba kukhula. Emva koko udala ingxaki ekufuneka uluntu lukhathalele; emva koko uvuselela ukuphendula ngokweemvakalelo ngabantu abafana noJeroben Pauw, uMatthijs van Nieuwkerk nabanye abaphathi bokuqonda; ukunika isisombululo. "Unokuthemba kuphela imifanekiso evela kwimithombo yeendaba ephambili kunye nomshicileli ovunyiweyo," ngumyalezo. Umthengisi wethayile usasaza iinzipho kwiindlela zokungena, ukuze uye kumthengisi wethayile ngesisombululo.
INkonzo yoTshutshiso loLuntu (i-OM) ijongene nokuchaphazeleka kokusebenzisa kakubi iifilimu ezibizwa ngokuba zi-deepfake, apho imifanekiso isetyenziswa zii-algorithms. Ubhala la NOS NgoMgqibelo.
Umtshutshisi woluntu, uLodewijk van Zwieten, uthi kwi NOS Ukuzixhalabisa ngokulula ezinokwenziwa ngazo iividiyo ezinzulu. “Kufuneka siqonde ukuba, ukuba sibona into, ngekhe sikholelwe oko. Kungekudala unokuyibona ngokulula into ngelixa ingekenzeki ngokwenene. ”
Funda ngaphakathi, phakathi kwezinye izinto eli nqaku (ku apha en apha) indlela ezinzulu ngayo izinto ezikhoyo iminyaka kunye nendlela iiprofayile zosasazo zasekuhlaleni ezihlala zisindwa ngayo zizinto ezinzulu, ukuze urhulumente akwazi ukuba nomnxibelelanisi wefowuni okanye abasebenzi basekhaya abeke iliso kwiingxoxo zosasazo loluntu, efihliwe emva kweeprofayili ezinzulu ezithembakeleyo zinethiwekhi ethembekileyo kunye neefoto kunye namavidiyo athembekileyo. Yifunde ngokwenene! Kwaye cinga nzulu malunga nokuxhasa umbhali onamathela intamo yakhe ngaphandle ukuze avelise konke oku. Yiba lilungu okanye ujoyine elinye iminikelo yesikhathi esisodwa kwaye babelane ngamanqaku ngangokunokwenzeka. Enkosi kwangaphambili.
Uludwe lwekhonkco lovimba: ikamva, ngkubonk.nl
U-Yolanthe Cabau kunye ne-polisi yamanqanaba e-DNA, imveliso entle kaJohn de Mol (njengeendaba ze-ANP)
tags: deepfakes, Dionne, olungeyonyani, eziziimbalasane, john de mol, ILodewijk van Zwieten, iindaba ezibuxoki, iindaba, OM, porn, Isamba
9 Septemba 2019 kwi-12: 52
Sukuwela ingxoxo kwiiforamu okanye kwimidiya yoluntu. Unokwenzeka ukuba uthethe kwiprofayile engeyiyo (inzulu) efihla iarhente karhulumente,
10 Septemba 2019 kwi-08: 30
Ndicinga ukuba i-DDS ngumzekelo wesifundo esibonisa oko! Ngaphambi kokuba uyazi, usengxoxweni eyothusayo enuka ngathi umgodi webhiya!
9 Septemba 2019 kwi-14: 30
Le nkcenkce isika amacala amabini, kunokwenzeka ukuba abantu balindele into enokwenzeka kwixesha elizayo. Umzekelo, imifanekiso elalanisa imeko yezopolitiko ezidumileyo, abalingisi, njl njl. Apho umntu angabeka khona ilebheli yokujula emva
10 Septemba 2019 kwi-08: 32
Ndiyoyika ukuba ezopolitiko yinkcazo enzulu ye fake. Ekhohlo okanye ekunene!
18 Septemba 2019 kwi-15: 21
kanye le bendiyicinga ...
9 Septemba 2019 kwi-15: 37
Into endizibuzayo yona yile nto enzulu ... 😀
9 Septemba 2019 kwi-15: 40
9 Septemba 2019 kwi-18: 17
..unjalo yimeko yokujonga nzulu kwiglasi. Ngubani obukele i-nos / rtl?
10 Septemba 2019 kwi-08: 22
Andinayo kangako (ngoku) kunye neFlits West, kodwa ngaphandle kokufota wayeye kwinqanaba! Ukuphumla: Sambal eFlits?!
10 Septemba 2019 kwi-08: 28
Ndiba nomdla ngakumbi ukuba iifilimu eziphuma e-Oranje ziya kuphuma zii-invoice eziphindwe kabini ngokubhekisele kulondolozo kunye nohlaziyo, njl njl. Njl. Nokuba yintoni uRutte ayithethayo, ayiyinyani okanye ayiyiyo, yijeli # 1 esikhaleni. Kwaye eyona nto imbi yile: Uyayiqhela!
10 Septemba 2019 kwi-08: 36
Khumbula nje ukuba u-anti Bea van Oranje uphakamise iibhola zikaRutte kwihashe. Ke, ngenxa yoko!
« Ngaba u-Boris Johnson (okhokho base-Ottoman) unokuqalisa isiphithiphithi eYurophu esiya kuphakamisa uBukhosi base-Ottoman?
I-US iyakuhlawula nini irhafu yemozulu kuzo zonke ezo bhombu baziphosayo? »
Iindwendwe ezipheleleyo: 14.496.475
SandinG op Yazi imbali ukuqonda i-ajenda ye-UN 2030
Ikhamera 2 op Yintoni eyinyani malunga nokubulawa kukaDerk Wstersum kwaye kuthetha ntoni oko 'ngqina lesithsaba'?
SalmonInClick op Kwimo yamapolisa, ufuna ukuvinjwa kwamapolisa okufota kunye nababoneleli "boncedo"